Mawliid Axmed Xassan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waxaan jecelahay inan idin la wadaago mowduuc dulucdiisu tahay ‘wadaniyada iyo faa’iidada ay leedahay.’’Mowduucan aad buu u balaadhan yahay maqaal kobanna lagagama hadli karo marka si kooban oo qodobaysan ayaan uga hadli doona insha allah hadaba. Waa maxay wadaniyada? “wadaniyadu waa dareen qofnimo iyo damiir umadeed taas oo shakhsigeeda ku dhalisa jacayl uu uqabo dalkiisa iyo dadkiisa, taas oo qofkeeda ka dhigta shaqsi kadamqanaya wixii xun ee dalkiisa iyo dadkiisa loo asteeyo una damqanaya dadkiisa iyo dalkiisa.” Macne labaad ayaa isna ah barashada cilmi bulsho kaas oo lagu baranayo gaar ahaan xaquuqda (rights) iyo masuuliyada (responsibility) uu leeyahay qofka …
Sidaan wada ogsoonahay qaadku waa aafo haysata bulshadeena taas oo ragaadisay horumarka, hab fikirka, qoyska, ilaha dhaqaalaha, caafimaadka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee uu u baahan yahay wadanku. Qaadku waa aafada aynu ognahay dhibtiisa, sidoo kalena aynu garanayno xalka iyo dawadiisa, hadana aan lagu dhaqaaqayn oo la iska dawaynayn. Macluumaad ku saabsan qaadka. 1. Ma ogtahay in ereyga qaad marka xaga danbe laga soo akhriyo uu noqonaayo “DAAQ”. 2. Ma ogtahay in erayga MIRQAAN uu ka kooban yahay laba eray oo kala ah: MIR oo macnihiisu yahay marka habbeenkii xooluhu daaqaaan (mirtaan). Ama weerarka habbeenimo, sida col habbeenkii wax …
Waxaan jecelahay inan idin la wadaago mowduuc dulucdiisu tahay ‘wax akhrisku waa waxa qudha ee ku gaadhsiin kara horumar iyo halka aad rabto.’’Mowduucan aad buu u baladhan yahay maqaal kobanna lagagama hadli karo marka si kooban oo qodobaysan ban uga hadli doona insha allaah hadaba, Waa maxay aqrisku? Akhrisku waa quudinta, kobcinta, kor uqadida, qimaynta maskaxda. Sida jidhku ugu bahan yahay cunto iyo cabid ayey maskaxduna waxay ugu bahan tahay akhris. Dadka wax akhriya waxa ay ka cimri dheer yihin dadka kale waxay taariikh iyo fikrado ka hayaan dadkii boqolaalsano ka horeyay waxayna taariikh iyo fikrado fiican uga tagaan dadka …
Fayraska coronavirus waa qoys balaadhan (coronaviridae) oo ka mida fayruusaadka sababa cudurada ku dhaca xayawaanka iyo bini-aadamkaba. Fayraska coronavirus waxa uu leeyahay noocyo kala duwan, qaar ku dhaca xayawaanka iyo kuwakale oo u kala gudba xayawaanka iyo bini-aadamka (zoonatic disease). Sidaan wada ogsoonahay coronaha ku dhaca aadamahu wuxuu haleelaa hawa-mareenka, kaas oo ku sababi kara caabuq. Hadaba muxuu yahay korona fayraska cusub? Dabayaaqadii sanadkii tagay december 2019 waxa magaalada wuhan ee dalka china ka dilaacay corona cusub, kaas oo loo bixiyey COVID-19 (Wuhan korona fayras). Cudurkan oo faroba’an ku haya dalka chinaha ayaa ku sii fidaya caalamka intiisa kale iyada …